HS:-Ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa XDS qeybta Hiiraan ayaa cagta mariyey degaan ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda Shabaab oo magaalada Bulo Burde ka xigta waqooyi bari. intii aan la qaadin dagaalka ayaa waxaa xog rasmi ah laga helay dhawr goobood oo ay saraakiil kooxdaasi ka mid ah ku dhuumaaleysanayeen.
Inkasta oo aysan aheyn wax isku dhigma awooda ciidan ee ku sugan magaalada Bulo Burde iyo Shabaabka qeybo Hiiraan ka mid ah wali ku dhuumaaleysanaya hadane warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in laga yaabo in ay Hiiraan noqoto meesha ugu badan ee lagu soo qabto saraakiil sar sare oo Shabaab ka tirsan oo intooda badan ku sugan degaano ay ka mid yahiin........... kama hordhaceyno .
Warar aan la dheyelsankarin oo aanu ka heleyno ilo kala duwana waxey sheegayaan in ay ciidamadu ku sii jeedaan magaalada Jalalaqsi oo ay kaka wajahan yahiin dhawr jiho iyadoo ay ciidamadu aad u qalabeysan yahiin kuwaasi oon u muuqan in marka ay magaalada qabtaan iskaka soo bixi doona.
Dhawaan ayey aheyd markii magaalada istiraatiijigaa ee Bulo Burde ay ciidamadu la wareegeen kedib markii ay ka soo galeen labo jiho, kooxda Shabaab ee laga saaray magaalada oo islahaa ciidamadu dib ayey ugu noqon doonaan meeshii ay ka yimaadeen dhib badan ayaa dhulka miyiga ah ka soo gaaray taasi bedelkeediina waxaa mudadaasi kedib aad u wanaagsanaa kalsoonida shacabka magaalada Bulo Burde kala dhaxeeya ciidamada XDS iyo kuwa Hiil-Walaal ee Amisom.
Wajiga labaad ee dagaalka ayaa hada u muuqda inuu noqon doono sidii wadada dheer ee isku xirta magaalada Belet Weyne iyo Bulo Burde looga sifeyn lahaa koox Shabaaab ka tirsan oo ay ka dhuunteen ragii hogaaminayey shabaabka Hiiraan oo iyagu si ay u helaan wax ay cunaan gaadiidka dadweynaha ku dhaca halkaas waxii saarana kala dega iyagoo qamaam ah.
Marka laga soo tago borobagaando qasaaraha dhaqaale,niyadjab iyo hajwareerka ku heysta Shabaab degaano ay ugu horeeyaan Hiiraan ma ahan wax halkaan lagu soo koobi karo marka aad joogto deegaanadii ay horey ugu sugnaayeen ee lagala wareegay siiba magaalooyinka waaweyn iyadoo aysan qofna kuu sheegin ayaad dareemeysaa jabka kooxda soo gaaray iyo jahwareerka siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya ku heysta.
La soco dhawaan saraakiil sar sare oo kooxda ka tirsan oo goobaha ay ku sugan yahiin lagu....................
· admin on April 23 2014 15:35:59 · 0 Comments · 1191 Reads ·
14,581,087 unique visits